युरोपेली बजार पुग्यो कर्णालीको अदुवा - कृषि पत्रिका
कर्णाली। विगतमा घैयाको भाउमा जाने अदुवाले अहिले राम्रै मूल्य पाउन थालेपछि कर्णालीका अदुवा किसान मख्ख छन् । प्रतिकिलो रु पाँच–१० मा बिक्री गर्दै आएका उनीहरुले हाल रु. ३० देखि ७५ सम्ममा घरकै मझेरीबाटै अदुवा बिक्रीवितरण गर्न पाएका छन् । यतिबेला अदुवा उत्पादक किसानलाई अदुवा बिक्रीवितरण गर्न भ्याइनभ्याइ छ । यसको संकलन र बिक्रीवितरण गर्ने यो उचित समय पनि हो । अदुवा कृषकले आफ्नो उत्पादनका लागि भारतीय बजार मूल्य कुर्नु परेको छैन । अहिले आफ्नै प्रदेशमा सहज तरिकाले बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । आफ्नो उत्पादनले बजार र मूल्य पाउन थालेपछि किसानको आकर्षण अदुवाखेतीमा बढ्दै गएको छ । यसअघि परम्परागतरुपमा गरिँदै आएको अदुवाखेती अहिले आधुनिक एवं व्यावसायिकरुपमा गर्दै जाँदा कर्णालीका अदुवा कृषकले यसलाई नगदे खेतीका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको भेरीगङ्गा नगरपालिका– ५ सुर्खेतस्थित छिन्चुको दक्षिणपूर्वी भागमा रहेको कालीदमारमा विसं २०७० मा स्थापित अदुवा प्रशोधन उद्योग ‘द अर्गानिक भ्याली प्रालि’ ले आव २०७१र०७२ यता अदुवा, टिमुर, बेसार, अलैँची, मेथी, निबुवा, कफी र लेमन ग्रास जुसका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । प्रालिले किसानको अदुवालगायतका उत्पादन लिन थालेपछि उनीहरुलाई सहज भएको हो । अर्गानिक माउण्टेन फ्ल्याभर, इन्भेष्टर होम र ओएमएक्स विभी मर्ज भएर निर्माण भएको ‘द अर्गानिक भ्याली प्राली’ रु एक करोड तीन लाख शेयर लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक समीर नेवाले जानकारी दिए । ‘सुरुमा प्रालीलाई नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभिएपी) ले रु ६२ लाख ८७ हजार लगानी गरेको थियो’, निर्देशक नेवाले भने, त्यसपश्चात् हामी आफ्नै लगानीमा प्रालीअघि बढाएका छौँ ।’
उनका अनुसार प्रालीले आफ्ना उत्पादनलाई नेपाली बजारभन्दा युरोपियन बजारमा निर्यात गर्दै आएको छ । उनले सुकेको चाना पठाउने काम गर्दै आएको बताए । खासगरी उद्योग सञ्चालनपश्चात् पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २६ टन अदुवाको चाना पठाउँदा प्रतिकिलो अमेरिकन डलर रु ४.८५ बिक्री गर्दा रु एक लाख चार हजार आम्दानी गरेको थियो । उनले अगाडि भने, ‘०७६/०७७ मा ६८ मेट्रिकटन पठाउँदा रु तीन लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका छौँ, प्रालीले आफ्नो उत्पादन युरोपको विशेषगरी जर्मनीमा पठाउने गर्दछ, युरोपियन देशले चिया, तेल, क्याण्डी फ्ल्याभर्ड, मसलाजन्य वस्तुका रुपमा अदुवा प्रयोग गर्ने गर्दछन्, त्यहाँ यसको माग बढी छ ।’
प्रालिले युरोपियन मुलुक जर्मन, नेदरल्याण्ड, युक्रेन, स्वीडेनलगायतका देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १०० टन माथि अदुवा निर्यात गरेर रु पाँच लाख ८० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अपेक्षा रहेको प्रबन्ध निर्देशक नेवाले बताए । ‘द अर्गानिक भ्याली प्रालि’ युरोपियन बजारमा उत्कृष्ट पाँचभित्र परेको उनले जनाए । यसले चालू आर्थिक वर्षमा अदुवाबाटै रु. ६ करोड ७८ लाख ६० हजार नेट आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रालीका लागि रु ४० लाख स्वीकृत भइसकेको निर्देशक नेवाको भनाइ छ ।
प्रालिले कर्णालीको अदुवालाई युरोप निर्यात गर्न १० चरण पार गर्नुपर्दछ । सुरुमा किसानबाट संकलन गरी त्यसलाई स्तरीकरण गर्ने, धुने, काट्ने, सुकाउने, गुणस्तर जाँच्ने, प्याकेजिङ गर्ने, स्याम्पलिङ, लेवलिङ र अन्त्यमा ‘डेलिभर’ गर्दै आएको छ । यसले आफैंले प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणसमेत गर्दै आएको छ । संकलन पश्चात् व्यवस्थित भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा वर्षेनी ६० हजार केजी अदुवा कुहिने गरेको उनले बताए । विशेषगरी, सल्यान, रुकुम, सुर्खेत, डोटी र पाल्पाका किसानले आफूले उत्पादन गरेको अदुवा प्रतिकिलो रु. ३५ मा बिक्री गर्दै आएका छन् । पुसको दोस्रो सातासम्म किसानबाट करीब ९०० मेट्रिक टन अदुवा संकलन गरेको प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक नेवाले जनाए ।
यो उद्योगमा पनि सिजनमा ५४–६० जनाले काम गर्छन् त्यसमा एकाध पुरुषबाहेक सबै महिला छन् । त्यसैले काम महिलाले गर्ने तर त्यसको आम्दानी पुरुषको स्वामित्वमा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न महिलाको नाममा खाता खोलिएको प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक नेवाले बताए । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका स्थानीय कृषक लक्ष्मी पौडेलले उद्योगले महिलाको श्रम र मेहनतको कदर गरेको बताइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘कृषि र श्रममा हामी महिला नै बढी सहभागी छौँ, तर त्यसबाट प्राप्त लाभ हामीले नै उपयोग गर्न नपाउने ?’ (रासस)